musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Famba Mberi Zuva Rokutanga: Artificial intelligence ndeyechokwadi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Famba Mberi Zuva Rokutanga: Artificial intelligence ndeyechokwadi.
AI inoshanda chete kana iyo data, uye puratifomu inoibata, yakakodzera chinangwa chekushandisa AI kuvaka zvirinani zviitiko zvevafambi.
Zuva rekuvhura reTravel Forward rakatanga nechikamu chakatsaurirwa kuAI mukufamba.
Zvishandiso zviripo zvekusarudzika kwevanhu vakawanda - asi pfungwa dzinofanira kuchinja. Segmentation haisi yemunhu.
Kana iwe ukagovana data, maalgorithms anogona kushanda kune ese masosi, personalization inogona kuve yekudyidzana, kudyidzana.
Vakuru vakuru vetekinoroji kubva kune yese indasitiri yekufambisa vanotenda izvozvo hungwaru hwekuziva (AI) ichaita basa rakakosha kufambisa kudzoreredzwa kwekufamba kwenguva yakareba sekunge pfungwa uye maitiro kune shanduko yekugovana data.
Zuva rekuvhurwa kweTravel Forward rakatanga nechikamu chakatsaurirwa AI mukufamba.
Andy Owen-Jones, CEO uye co-muvambi weAI-early-adopter bd4travel, akataura kuti AI uye kudzidza muchina ndiyo chete nzira yekuti makambani ekufambisa "afunge" izvo vafambi vavo vanoda.
Nekudaro, kuti upfuure "avhareji" uye mu "personalization", AI nyanzvi dzinoda kuwana data
"Zvishandiso zviripo zvekugadzirisa vanhu vakawanda - asi pfungwa dzinofanira kuchinja. Segmentation haisi yemunhu."
Sundar Narasimhan anobva kuSaber Labs akacherekedza kuti mutsauko uyu unoratidzwa mumashandisirwo emabhizinesi ekunyorera. AI uye kudzidza kwemichina mukufamba kwave kugadzirwa uye kwakagadziridzwa kuvandudza ruzivo rwevafambi uye kure nekugadzirisa goho kune vatengesi.
Akakurudzirawo mifungo mitsva maererano nekugovana data.
"Kana iwe ukagovera data, maalgorithms anogona kushanda kune ese masosi, hunhu hunogona kushandira pamwe, kudyidzana." Akatsanangura nyaya yekushandiswa kweramangwana apo AI inogona kupa ruzivo rwekufamba uko kubhururuka uye pekugara zvese zvakagadzirirwa munhu.
Mindsets, paradigms nyowani uye kufunga kutsva yaive dingindira mukati mezvimwe zvikamu zvakare. Jospeh Ling anobva kuVouch akatsanangura kuti bhizinesi rake riri kuchinja sei mafungiro muindasitiri yehotera.
“Tinofanirwa kugonesa varidzi vemahotera kuti kudyidzana kwevanhu hakuna kuenzana munzvimbo dzese dzekubata. Chigadzirwa chedu chinobatsira varidzi vemahotera kuita mabasa mazhinji uko kusingade kubata vanhu, izvo zvinosunungura vashandi vemuhotera kuti vatarise mabasa anokanganisa ruzivo rwevaenzi, ”akadaro.
Imwe indasitiri umo pfungwa dzinoda kuchinjwa ndeyekubhururuka. Nhaurirano yepaneti masikati yakanga isina kujeka mukuona kwayo kuti kuvandudza kugoverana kwemashoko pakati pevendege, vashandi vepaairport uye kutonga kwekufambisa kwemhepo kunogona kuvandudza kushanda kwendege uye nzira, nekubatsirwa kwekukurumidza kwekubuda kwepasi kuburikidza nekuderedzwa kwemafuta ekupisa.
Yann Cabaret anobva kuSITA akaudza mukamuri yaive yakazara vanhu kuti "tekinoroji yemazuvano inotsigira kubatana - nedatha yatinayo tinogona kushandisa muchina kudzidza kukwenenzvera mafambiro endege, mudenga kana nhandare yendege."
Nekudaro, kufunga kwekutengesa kunodzivirira vazhinji vevashandi vebazi rakazvimirira kugovana data kune mumwe nemumwe, mamiriro asingaenderane nekurwisa dambudziko remamiriro ekunze. "Kuedza kwemaindasitiri kunogona kushanda chete kana munhu wese arimo," akadaro.
Huwandu hwe data yakarongeka uye isina kurongeka mukati meindasitiri yekufambisa inogadzira nzvimbo yakakwana yehungwaru hwekugadzira kugadzira zvigadzirwa zvitsva, zvirinani zviitiko zvevafambi uye yakawanda mihoro yemakambani ekufambisa. Nekudaro, mhedzisiro yeizvi ndeyekuti huwandu hwe data hunoreva kuti mafemu anofanirwa kufunga nezve simbisa iyo data asati aishandisa.
Manual Hilty kubva kune akawanda-mazuva erwendo kuronga tekinoroji nyanzvi Nezasa akati bhizinesi rake ranga richigadzira chikuva charo kuitira kuti rikwanise kutsigira data analytics uye AI pachiyero uye kushandisa izvo zvinonzwisisika padanho remunhu.
"Kuronga, kubhuka uye kuzadzisa rwendo rwemazuva mazhinji kune akawanda, akawanda ekubata nzvimbo imwe neimwe ine zvikamu zvayo zvekuoma," akadaro. "Tinoziva kuti AI inoshanda chete kana iyo data, uye chikuva inoibata, inokodzera chinangwa chekushandisa AI kuvaka zvirinani zviitiko kune vafambi".